विदेशमै नेपाली चेलीलाई भुँडी बोकाएर फ रार भएका मुसलमान युवाको घर पुग्दा यस्तोसम्मको दृश्य देखियो (भिडियो हेर्नुस्) – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २२, २०७८ समय: १३:०९:०३
झापा जिल्लाको बुद्धशान्ति नगरपालिका वडा नम्बर ३ किनाराबस्ती भन्ने ठाउमा घर भएकी अनुसा रसाइली नाम गरेकि एक महिला वैदेशिक रोजगारिको क्रममा दुबै गएकी रहिछिन । दुइचार पैसा कमाउने सपना बोकेर दुबइ गएकी अनुसाको जिन्दगी नै ब”र्बा”द गरिदियो यहि वैदेशिक रोजगारले । उनि दुबइमा काम गर्ने क्रममा उनको भेट सिरहामा बस्ने मुसलमान समुदायका नुर खान नाम गरेका पुरूषसग भएछ जुन भेट उनको जिबनकै सबैभन्दा दु”र्भाग्यशाली भेट बन्यो ।
उनी दुबई गएपछी काम गर्ने क्रममा उनको भेट सिरहाको मिर्च्या घर भएका नुर खान नाम गरेका पुरुषसग भएको रहेछ । भेटघाट पछि बोलचाल अनि मायाप्रीति अनि त्यसपछी मायाको चिनोको स्वरुप अनुसा पेटमा गर्भ । यति हुन्जेलसम्म उनिहरुको सम्बन्ध पनि राम्रै रह्यो । निरन्तरको भेटघाट, मिठोमीठो कुराकानीले यता सम्बन्ध भने तितोपन ल्याइदियो । नानी जन्मेपछी त वास्तै गर्न छोडेछ्न नुरखानले ।
कठै अनुसा पेटमा सात महिनाको गर्भ छ्हुन्जेलसम्म उनी बिदेशमा नै काम गरेर बसेकी रहिछिन तर त्यसपश्चात भने कम्पनिले थाहा पाएछ र उनको शरीर नै उनको श”त्रु बन्न पुग्यो । पहिले काठमाडौं जाउ म सबैकुराको तारतम्य मिलाउछु भनेका नुर खान भने दुइमहिनासम्म सम्पर्कमा नै आएनछ्न ।
दुइमहिनापछि भने अनुसाले खोजी गरेपछि नुरखान सम्पर्कमा आए र उनले काठमाडौं जाने सल्लाह दिए र खर्च सबै आफुले हेर्ने बाचा पनि गरे उनले । पैसा पनि पठाइदिएका नुर खान नानी जन्मेपछी भने अनुसालाइ हेर्न छा”डे र त्यसपछी उनी ए”काएक बे”पत्ता भएका थिए र सम्पर्कबिहिन रहेका थिए । केहिदिन अघि उनले अनुसालाइ फोनमार्फत आफ्नो अर्कै श्रीमती रहेको र उनिसग बस्न नसक्ने कुरा बताएका थिए र यसैक्रममा आज उनिबारे बुझ्न मिडिया उनको घरमै पुगेको छ ।
नुरखानको छोरिको जिम्मेवारी लिने तयार देखिए तर अनुसाले भने नानी नदिने कुरा खुलाइन । आफुले दु”ख गरेर हुर्काएको नानी नदिने बताउछिन उनी । छोरिको बारेमा कहिले नसोचेको र अहिले ए”क्कासि यस्तो कुरा गरेको स”हिनन अनुसाले । अनुसासग भने बस्न नसक्ने बताए उनले । उनको अर्कि पनि श्रीमती रहेको बताउछ्न उनि ।
फोनमा उनिहरु दुइको च”र्का”च”र्की नै पर्यो । सिरहा जिल्ला कल्यानपुर नगरपालिका वडा नम्बर ६ निवासी नुरखानको घरमै पुगेको छ मिडिया । नुरखानकै छिमेकि एक पुरुषले यो घटनाप्रती आफु अ”न्जान रहेको र यदि यो साचो हो भने अनुसाको डि एन ए टेस्ट गर्नु पर्ने कुरामा उनले जोड दिए । नुरखान यदि दो”षी हो भने उ सबैको सामु आउनुपर्ने र उनलाइ कारबाही हुनुपर्ने बताउछ्न उनी । उनले यस घटनामा बहिनिको पनि दो”ष रहेको बताउछन किनकी उनले पनि अर्काको देशमा गएर मायाप्रीती लगाएकी छिन ।
नुर खानकै अर्का छिमेकीको पनि भनाइ यहि नै रहेको छ कि यदि त्यो सानो बच्चा नुरकै हो भने उनले स्विकार्नै पर्ने र बच्चाको भबिष्यसग उनले खेल्न नपाउने कुरामा जोड दिए । नुरखानका परिवारबाट भने कसैको पनि उपस्थिति देखिएन, आखिर कहाँ गए त नुर र उनका परिवारजन ? यसरी कहिलेसम्म भाग्छ्न उनी ?
Last Updated on: December 8th, 2021 at 1:09 pm